Archive du 20170224
Fanjakana Malagasy Manary 750 tapitrisa dolara isan-taona
Mitentina 500 hatramin�ny 750 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very amin� ireo harena an-dranomasina eto Madagasikara noho ny lafiny tsy filaminana, araka ny fanehoan-kevitry ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin�ny Carlton Anosy omaly.
Asio � action � ary eee
Miarahaba jean a, ilay izy anie ra jean tsy vitan�ny hoe mihetsiketsika sy mitokana zava-bita eo nareo dia milamina ny zava-drehetra e.na mahazo sambo haingam-pandeha 100 aza isika ka mahavita manenjika ireo mpanao trafika any afovoan-dranomasina be any
Fitsarana Malagasy Mihamahazo vahana ny kolikoly
Nosokafana omaly alakamisy 23 febroary tamin�ny fomba ofisialy teny amin�ny Fitsarana tampony Anosy ny taom-pitsarana ho an�ity taona vaovao 2017 ity
Fanday mamotika voly any Afrika Mananontanona antsika ny loza
Efa manomboka mihanaka any amina firenena vitsivitsy any Afrika ny karazana fanday iray ary mamotika ny fambolena toy ny vary, katsaka, sorgo ...
Fitsaram-bahoaka, asan-jiolahy Be galona 3 tokony hametra-pialana
Mikorontana tanteraka ny firenena amin�izao fotoana izao. Tsy voafehin�ny mpitandro ny filaminana intsony ny fandriampahalemana, fa tena mandry andriran�antsy ara-bakiteny ny vahoaka.
Boriborintany faha-IV Maimaimpoana ny kopia voalohan�ny zaza vao teraka
Adidin�ny mpitantana ny kaominina ny mijery ifotony manara-maso ny fanavaozana na fanamboarana ireo fotodrafitrasa vatsian�ny CLD (Comit� Local de D�veloppement) vola, hoy ny delegen�ny boriborintany faha-IV Ramahandrimanana Solofoniaina Daniel.
Herisetran�ny polisy Efa nandrodana fitondrana
Polisy ! Efa nanao tantara ary mbola mitohy mametraka tantara eto Madagasikara izany
Kaominina Manakara Mipaika ny oran�ny fampandrosoana
Anisan�ny tan�na mafana ara-politika i Manakara ao Vatovavy Fitovinany. Nanaporofo izany ny tranga tamin�ny 2009.
Jean Nirina - HAFARI Nifamela tamin'ny olona nitory azy
Nifamela tanteraka ny filoha nasionalin�ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina sy Ramatoa Joella Anthony Ndakana, ilay renim-pianakaviana nitory itsy voalohany momba ny resaka fitazonan�olona an-keriny, ka nampiditra am-ponja azy.
WEBHELP MADAGASCAR Nahazo ivon-toerana vaovao
Nahazo ivon-toerana vaovao ny Webhelp Madagascar, orinasa laharana fahatelo any amin�ny firenena Eoropeana, havanana amin�ny fampifandraisana ny olona isan-tsokajiny amin�ny alalan�ireo karazam-pitaovana manaraka ny teknolojia avo lenta toy ny finday.
Rehefa ny lehibe no voakitikitika dia mailaka ery ny fandraisan�andraikitra eto amintsika.
Sekoly ambony UPRIM Nanamarika ny andron�ny Telma
Nanamarika ny andron�ny Telma ny sekoly ambony UPRIM. Ny alarobia teo no nanatanterahany azy ity tetsy amin�ny foibeny etsy Andavamamba,